China Eye nesithunzi Ukwenziwa kunye Factory | UWangtong
Isithunzi samehlo linyathelo elibalulekileyo kwindlela esiqhele ukwenza ngayo. Kukho imibala emininzi yesithunzi samehlo, kwaye indlela yokupeyinta yesithunzi samehlo nayo yahluke kakhulu. Isithunzi seliso kunzima kubaqalayo ukuqala.
Abaqalayo ukusebenzisa amanyathelo esithunzi somfanekiso.
Ukuzoba njani ukwenziwa kwemihla ngemihla kwithunzi leliso
Inyathelo 1: Usebenzisa ibrashi yesithunzi enkulu, sebenzisa isithunzi esinombala okhanyayo ngaphezulu kwesokethi yamehlo kwaye utshayele iinkophe.
Yiya ngombala okhanyayo okanye umthi wamehlo ongabonakali mnyama kakhulu.
Inyathelo lesi-2: sebenzisa umbala okhetha ukujulisa ekupheleni kweliso, naka ingqalelo kwityala elincinci lokugquma okungaphezulu, kodwa kaninzi amaxesha amaninzi umphetho wokudinwa, ukudumba kweenkophe zosana kangangoko kunokwenzeka ukunqanda umbala weperile. isithunzi wamehlo kunokuba.
Inyathelo lesi-3: Faka umbala ofanayo wesithunzi samehlo njengoko kwiNyathelo 2 kunye nebrashi eneenkcukacha ukujula ngaphantsi kweliso.
Inyathelo 4: ekugqibeleni ngokwemikhwa yabo kwi-eyeliner brush kwi-mascara inokuba, ayizukutsala i-eyeliner baby ayizobi ​​isithunzi iliso nayo inokwenzeka, isithunzi sokwenza iliso lemihla ngemihla asilula.
Abaqalayo ukusebenzisa amanyathelo esithunzi somfanekiso
Inqaku eliphambili labaqalayo lokuzoba isithunzi esifanelekileyo kukugqunywa kwesithunzi samehlo. Isithunzi samehlo seMatte sesona sinzima ukusibeka ngaphezulu. Ukugqume ngombala weeperile kunokwenza ukuba iliso lenze ngokuthe nkqo
Inyathelo loku-1: ifom yamashiya eye yakroba ngokwamashiya akho, khetha usiba lwamashiya oluthumela umbala ukuzoba isakhelo samashiya ngokufanelekileyo.
Inyathelo 2: Khetha isiseko sokufihla esikufutshane nethoni yesikhumba sakho ukugubungela amabala eenkophe.
Inyathelo lesi-3: I-powder evulekileyo yokugubungela ijwabu leso, oku kunokwenza ukwakheka kwamehlo komelele ngakumbi, ungazenzi izithambiso.
Inyathelo 4: Faka isithunzi esimehlo esimnyama esimnyama ngebrashi kwaye usisebenzise kwinkophe njengombala osisiseko. Faka isithunzi phantsi kwesokethi yamehlo.
Inyathelo 5: ibhulashi yesithunzi esiphakathi esisezantsi nasentloko kunye nomsila wamehlo, indawo ekungekho mfuneko yokuba uyidaye.
Inyathelo 6: Itywina elibomvu lesithunzi setywina kumngxantathu ongasemva weliso kwaye ubunzulu, bincinci kunangaphambili, akufuneki batyhafe.
Inyathelo 7: Umnwe onamandla onke ubuyile. Dipha kwisithunzi seliso legolide le-champagne uze uyidabise embindini wejwabu leso.
Inyathelo 8: khetha ibrashi yokubamba idizzy efanelekileyo, umda wesoji sokubamba isozizi unokubamba.
Inyathelo 9: Faka isithunzi seliso le-champagne kwakhona, dab embindini wejwabu leso.
Inyathelo 10: zoba ulungelelwaniso lwangaphakathi nolwangaphandle, iliso le-besmear, ukwenziwa kwamehlo kutsaliwe.
Egqithileyo Isiseko soTywala